Nin Mareykan ah oo u baxsaday Kuuriyada Waqooyi oo dhintay - BBC News Somali
Image caption Mr Jenkins ayaa ka gudbay xuduudda aan la marin karin ee labada Kuuriya, ka dibna wuxuu isu dhiibay maamulka Pyongyang, xilligaas oo uu ahaa 24 sano jir
Askeri ka mid ahaan jiray ciidamada Mareykanka oo u goostay dhanka Kuuriyada Waqooyi, ka dibna 40 sanno u xirnaa maamulka Pyongyang ayaa dhintay.
Wuxuu u dhintay xanuun dhanka wadnaha ah, sida warbaahinta Japan ku warrameyso. Xaaskiisa oo qoraal soo saartay ayaa sheegtay in ay "ka naxday geeridiisa", sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP.
Sannadkii 1965-tii, xilli uu ku sugnaa xerada ciidamada Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed, Mr Jenkins wuxuu go'aansaday in uu askarta ka dhexbaxo, wuxuuna u baxsaday dhanka Waqooyiga. Wuxuu xilligaas ka baqayay in ay dilaan ciidamada ilaalada xadka xilliyada uu kormeerka sameynayo, ama in loo diro dagaalkii Vietnam.
"Waxaan u maleynayaa in aan doqon ahaa. Alle hadduu samada joogo, halkaas buu i geyn lahaa," ayuu yiri Mr Jenkins oo 2005 wareysi siiyay warbaahinta CBS.
Lahaanshaha sawirka AFP/JIJI PRESS
Image caption Mr Jenkins iyo qopyskiisa
Mr Jenkins wuxuu sheegay in la garaaci jiray, sidoo kale in jirkiisa lagu sameeyay tijaabooyiin dawo oo mararka qaar ahaa xadgudub naxariis darro ah. Waxay ahayd khibrad uu Mr Jenkins ku qeexay sida "cadaabta".
"Kuuriyada Waqooyi waxay dooneysay in aan dhinto"
Balse wuxuu dhibaato kala kulmay laqabsiga dunida casriga ah ka dib markii uu sannado badan ku xirnaa dal go'doonsan.
Image caption Militariga Mareykanka ayaa Mr Jenkins baray isticmaalka kombuutarada.
"Kuuriyada Waqooyi waxay dooneysay in aan dhinto," ayuu u sheegay Wargeyska Los Angels Times.